Sida loo dhigo calaamadeynta sawirka taleefoonka iyo PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ku dhejinta calaamadeynta sawirka waa dariiqa loogu xirayo magacaaga ama meheraddaada sawir. Xilligan, waxaa jira dhowr barnaamijyo iyo codsiyo kuu oggolaanaya inaad geliso astaantaada, taleefankaaga ama PC-gaaga, tallaabooyin dhowr ah. Fiiri sida ay u fududahay.
Si aad ugu dhejiso calaamadeynta sawirka taleefankaaga, aan adeegsanno barnaamijka PicsArt. Bilaash ahaanshaha ka sokow, waxay kuu oggolaaneysaa inaad u adeegsato sawir iyo qoraal labadaba, qaab shaqsiyeed. Sidaa darteed, ka hor intaanad talaabada talaabo ah u qaadin, waa lagama maarmaan inaad kala soo baxdo arjiga qalabkaaga Android ama iPhone.
1. Furan PicsArt oo sameyso koonto ama ku gal galkaaga ama xogta isticmaale ee Facebook;
Haddii ay dhacdo inaad aragto talo soo jeedin ah inaad ku biirto barnaamijka, taabo X, badanaa waxay ku yaalliin dusha shaashadda si loo xiro xayeysiinta. Ikhtiyaarka lagu gelinayo astaan-biyood ayaa laga heli karaa kheyraadka bilaashka ah ee adeegga.
2. Shaashadda guriga, taabo + in la bilaabo;
3. Taabo sawirka meesha aad rabto inaad geliso calaamadeynta si aad u doorato. Haddii aadan arkin, u tag Dhamaan sawirada si aad u daawato dhammaan sawirrada laga heli karo qalabkaaga;
4. Jiid toolbar salka hoose ee sawirka si aad u aragto dhammaan howlaha. Waan taabtay Qoraalka;
5. Kadib qor magacaaga ama kan shirkaddaada. Taabo astaanta jeegga (✔) markaad dhamaysid;
6. Kahor intaadan bilaabin tafatirka, dhig qoraalka meesha aad rabto. Si tan loo sameeyo, taabo oo jiido sanduuqa qoraalka.
Waxa kale oo suurtagal ah in la kordhiyo ama la dhimo sanduuqa qoraalka iyo, sidaas awgeed, warqadda, adoo taabanaya oo jiidaya wareegyada ka muuqda geesaheeda;
7. Hadda, waa inaad isticmaashaa qalabka wax lagu qoro ee qoraalka si aad uga tagto astaan-biyoodka sida aad doorbideyso. Kheyraadka soo socda ayaa la heli karaa:
FuenteWaxay bixisaa qaabab kala duwan oo xarfaha ah. Markaad taabatid midkood, waxaa lagu dabaqayaa qoraalka la geliyay sawirka;
Kor: Sida magaca ka muuqata, waxay kuu oggolaaneysaa inaad beddesho midabka warqadda. Hubi in ugu dhakhsaha badan, weli waxaa jira xulashooyin lagu darayo kala-qaadista iyo qaab-dhismeedka;
Caano: wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xuduud ku dhejiso warqadda oo aad doorato dhumucdeeda (baarka Tirada);
Furfurnaan: beddel hufnaanta qoraalka. Tani waa muuqaal muhiim ah si astaamaha loo galiyo si xeeladeysan, iyadoo aan la carqaladeynin aragtida sawirka;
Sombra: shaqeyn si aad u geliso xarafka warqadda. Waxay u oggolaaneysaa in lagu doorto midab loogu talagalay hooska, iyo sidoo kale in lagu hagaajiyo xoogeeda iyo booska;
Bueno: wuxuu galiyaa qalooca erayga ama oraahda, iyadoo loo eegayo xagasha lagu qeexay baarka Isku laab. Iyada oo kuxiran nooca ganacsiga aad leedahay, waxaad ku siin kartaa sumaddaada taabasho dabacsan.
8. Ka dib markaad tafatirto, u gudub calaamada jeegga (✔) ee geeska midig ee kore ee shaashadda;
9. Si aad u kaydiso natiijada, taabo astaanta falaarta ee geeska midig ee kore;
10. Shaashadda xigta, u gal Badbaadi ka dibna gudaha Ku keydi qalabkaaga. Sawirka ayaa lagu keydin doonaa Gallery ama Maktabadda taleefankaaga casriga ah.
Geli muuqaalka astaan-biyoodka
PicsArt sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad geliso astaanta shirkadda halkii aad ku qori lahayd magacaaga sumadda. Si tan loo sameeyo, waxaad marka hore u baahan tahay inaad lahaato astaantaada astaanta ee JPG maktabadda o Biblioteca taleefanka gacanta.
Marka kaliya raac tallaabooyinka 1 ilaa 3, ayaa kor lagu tilmaamay. Kadib, saxaaradda qalabka, taabo Sawir. Xulo feylka aad rabto oo ku xaqiiji Kudar.
Sida qoraalka oo kale, waad isku hagaajin kartaa booska iyo cabirka sawirka la geliyay adiga oo riixaya oo jiidaya. Si aad u cabirisid inta aad kudayactireysid saamiyada, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad doorato astaanta falaarta ee laba-madax leh
Dhigay astaanta, tag xulashada Furfurnaan, waxaa laga heli karaa shaashadda hoosteeda. Yaree si ay u noqoto mid hufan si aysan u dhibin sawirka weyn, laakiin wali waa muuqdaa. Ku buuxi hawsha astaamaha xaqiijinta (✔) xaga kore ee shaashadda midigta.
Si aad u kaydiso natiijada, taabo astaanta falaarta ee geeska midig kore iyo shaashadda xigta tag Badbaadi. Xaqiiji go'aanka gudaha Ku keydi qalabkaaga.
Casharka xiga, waxaan adeegsan doonnaa websaydhka iLoveIMG. Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad geliso calaamado sawirro iyo qoraal labadaba, marka lagu daro u habeynta cabbirka iyo madoowga. Isticmaaluhu wuxuu sidoo kale si fudud u calaamadeyn karaa sawirro badan isla waqtigaas.
1. Fur furaha biraawsarka aad dooratay oo marin u hel aaladda iLoveIMG ee calaamadeynta biyaha;
2. Guji badhanka Xullo sawirro oo dooro sawirka aad rabto inaad ku dhejiso calaamadda kombiyuutarkaaga;
3. Nidaamka gelinta calaamadaha astaamaha iyo qoraalka ayaa la mid ah:
A) Sawirka: hadaad rabto inaad sawir galiso sida astaanta shirkadaada, dhagsii Kudar Sawirka. Kadib dooro sawirka kumbuyuutarkaaga.
LABAAD) Qoraalka: guji Kudar qoraal. Qor qoraalka la doonayo, sida magacaaga ama magacaaga. Waad habeyn kartaa qaybaha soo socda ee ereyada:
Fuente: Dhagsiga Arial wuxuu muujinayaa xulashooyinka kale;
Talla: waxaa laga heli karaa astaanta ka kooban laba xaraf T (Tt);
Qaabka: farta geesinimada leh (labaad), italic (yo) iyo hoosta ka xariiq (U);
Midabkii asalka ahaa: adoo gujinaya astaanta baaldiga ranjiga;
Midab warqad iyo haraad: waxaa la heli karaa adigoo gujinaya astaanta xarfaha UN
Qaabaynta: astaanta ay sameeyeen seddex xariiq, waxaa suurtagal ah in qoraalka la caddeeyo ama la caddeeyo.
4. Kadib ku dheji sawirka ama sanduuqa qoraalka meesha aad rabto adigoo gujinaya oo jiidaya. Si aad u cabirto, guji kaliya wareegyada geesaha oo jiido;
5. Si aad u hagaajiso mugdiga, guji astaan ​​laba jibbaaran oo laba jibbaaran oo gudaha ah. Bar ayaa ka muuqan doona meesha aad ku kordhin karto ama yareyn karto heerka daahfurnaanta;
6. Haddii aad rabto inaad geliso isla calaamadeynta sawirrada kale, dhagsii +, dhinaca midig ee sawirka. Kadib dooro sawirada kale kombuyutarkaaga;
Waad gujin kartaa mid kasta si aad u aragto sida barnaamijku u ekaan doono oo si shaqsiyan loogu hagaajin doono, haddii loo baahdo.
7. Guji badhanka Sawirada Watermark;
8. Kala soo bax feylka Soo dejiso sawirrada calaamadeysan. Haddii aad ku dhejisey calaamadeynta sawirro badan isla waqtigaas, waxaa lagu soo dejinayaa hal feyl oo qaab .zip ah.
Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso khadka tooska ah oo aadan diyaar u ahayn inaad ku bixiso arjiga tafatirka, waxaad isticmaali kartaa Rinjiga 3D. Barnaamijku wuxuu ku saleysan yahay Windows 10. Haddii aad haysatid noocaan nidaamka ah ee kumbuyuutarkaaga lagu rakibay, waxaad u maleyneysaa inaad sidoo kale haysato software-ka.
Si ka duwan xulashooyinkii hore, suurtagal maaha in la beddelo mugdiga. Markaa hadaad rabto natiijo khiyaano badan, way fiicnaan kartaa inaad isticmaasho qaar ka mid ah xalalka kor lagu muujiyay.
1. Rinjiga Furan 3D;
2. guji Liiska;
3. Kadib u tag Geli oo dooro sawirka aad rabto inaad ku dhejiso calaamadda biyaha;
4. Iyada oo sawirka ka furan yahay barnaamijka, guji Qoraalka;
5. Dhagsii sawirka oo gal qoraalka summada leh. Dhinaca midig ee shaashadda, waxaad ku arki doontaa xulashooyinka loo heli karo shaqada qoraalka. Si aad u dalbato, marka hore ku dooro qoraalka jiirka.
3D ama qoraalka 2D- Kaliya isbeddel ayey sameyn doontaa haddii aad isticmaaleyso 3D View ama Mixed Reality function;
Nooca font, cabirka iyo midabka;
Qaabka qoraalka: geesinimo (N), waa faal (yo) iyo hoosta ka xariiq (S)
Buuxinta asalka- Haddii aad rabto qoraalka inuu yeesho asal midab leh. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad doorato hooska la doonayo sanduuqa ku xiga.
6. Si aad u dhigto qoraalka meesha aad rabto, dhagsii oo jiido sanduuqa. Si aad u cabirto sanduuqa qoraalka, dhagsii oo jiido labajibaarayaasha ku yaal xadka;
7. Markaad gujiso meel ka baxsan sanduuqa qoraalka ama aad riixdo furaha gala, qoraalka waa lagu hagaajinayaa meeshii la galiyay lamana tifaftiri karo mar dambe;
8. Si aad u soo gabagabeyso, raac wadada: Liiska → Kaydi Sida → Sawir ahaan. Xullo qaabka aad rabto inaad keydiso oo aad kudhameyso Badbaadi.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho astaanta shirkaddaada, samee uun tallaabooyinka 1, 2 iyo 3 ka dibna ku celi, laakiin markan, furitaanka sawirka astaanta. Kadib si fudud u samee hagaajinta lagu tilmaamay tallaabada 6 oo keydi, sida ku cad gudaha tallaabada 8.
Sida madaxa madax looga sameeyo erayga
Tifatirayaasha Fiidiyowga Fiidiyow ee ugu Fiican Qalabka Mobilada
'Photoshop' Khadka tooska ah: Beddelka Tifatiraha Sawirka Bilaashka ah ee Bilaashka ah